Ukukhupha uGoogle kwiiFoto eziKhethiweyo zeMifanekiso yeMac | IPhone iindaba
UGoogle usungule Isikrini sasimahla sabo bonke abasebenzisi beMac Oko kusibonisa iifoto ezikumgangatho ophezulu ekwabelwana ngazo ngokubanzi kwaye zithandwa kakhulu kwaye zixatyisiwe ngabasebenzisi bakaGoogle +.
Ukuba udiniwe kukusebenzisa izikrini ezifanayo kwi-Mac yakho okanye, njengemeko yam, awunakubavumela ukuba benze, mhlawumbi yile ithuba elihle lokuba ikhompyuter yakho ibonise imifanekiso emihle ngelixa ungayisebenzisi.
1 Eyona mifanekiso ilungileyo kaGoogle + ngoku njengesihenqo esikwi-Mac yakho
2 Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani i-screensaver kaGoogle entsha yeMac
Eyona mifanekiso ilungileyo kaGoogle + ngoku njengesihenqo esikwi-Mac yakho
Ngaba udikwe zizikrini ezifanayo kwi-Mac yakho okanye kwi-MacBook? Ngoku uGoogle uyasimangalisa nge "screensaver" entsha leyo uqokelela ezinye zeefoto ezintle, ezabelwana ngazo kunye nezithandwayo ngabasebenzisi benethiwekhi yokuncokola kaGoogle +. Ukongeza, isimahla ngokupheleleyo kwaye ngokungathandabuzekiyo iya kwenza ukuba izixhobo zethu zibonakale zintle kakhulu kwaye zintle.
Rhoqo, isigebenga sokukhangela sihlala sibonisa iifoto ekwabelwana ngazo kwinethiwekhi yeGoogle + yenethiwekhi kwizikrini zezixhobo zayo eziphathwayo, ngoku ezibizwa ngokuba yiPixel, kunye nakwiithelevishini kunye nabagadi abaxhunyiwe kwimveliso yeChromecast kunye neGoogle Fiber. Ewe ngoku esi sipho sitsha sibizwa ngokuba "ziFoto eziFakiwe" sizisa ezo foto zifanayo kwiiMacs zethu.
Yile ndlela uNeil Inala, uMphathi weMveliso kaGoogle ukusukela ngo-2014, ayichaze izolo ngeprofayile yakhe kuGoogle +:
Ukusuka kwii-skylines ezimangalisayo ukuya kwiimbono ezithandekayo, abafoti abanetalente babelana ngomsebenzi omuhle nomtsalane kuGoogle + yonke imihla. Ukuzisa ezi foto kubaphulaphuli ababanzi, sibonise ukhetho kuzo kumabonakude nakwimonitha kwihlabathi liphela ngeGoogle Fibre kunye nezigidi zezixhobo zeChromecast.
Ngoku, kuyasivuyisa ukwazi ukwenza ezi foto zintle zamalungu ethu ukuba zifikeleleke nangakumbi ngokuzizisa kwiikhompyuter zazo kunye neefowuni [ze-Android].
Imifanekiso eyenza esi sikhuselo sitsha seGoogle seMac silandela indlela yokukhetha esekwe yinkampani ngokwayo ngale ndlela asizukufumana bantu babonakalisiwe kubo, kwaye asizukufumana naluphi na uhlobo lwesicatshulwa okanye ii-watermark. Le yimifanekiso yeefoto enikezelwa kwifayile ye- Isisombululo esisezantsi se-1080p.
Imifanekiso nganye esetyenzisiweyo inikwe umbhali wayo ngokufanelekileyo ngekhonkco ngqo kwiprofayili yabo kuGoogle + esinokuyifumana kwenye yeekona zescreen ngelixa ifoto ihleli apho. Yintoni egqithisile, Abasebenzisi abasebenzisa izikrini ezininzi baya kubona ifoto eyahlukileyo iboniswe nganye nganye, kwaye ayingomfanekiso ofanayo ngaxeshanye.
Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani i-screensaver kaGoogle entsha yeMac
Inkqubo yokukhuphela kunye nofakelo ilula ngokwenene. Isikrini esitsha esigcina uGoogle kwiMac inobunzima be-8,1 MB kuphela ke ifayile elula kakhulu. Ewe kuphela iyahambelana kwiikhompyuter zeMac ezinenguqulo ye-OS X 10.9 okanye ngaphezulu efakwe.
Ukukhuphela kunye nokufaka isikrini seGoogle kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo.
Fikelela kwifayile ye- iphepha elisemthethweni ukuba inkampani isungule ngesi sizathu kwaye ucinezele iqhosha «Landa iscreensaver». Ngendlela, unokubona ukuba le mifanekiso ikhethiweyo iboniswa njani kwiscreen sakho.
Nje ukuba ifayile ikhutshelwe kwikhompyuter yakho, kuya kufuneka uyivule kwaye ucofe kuyo kabini.
Emva koko "Ukukhethwa kweNkqubo" kuya kuvula. Khetha phakathi kwezi ndlela zimbini zikhoyo ("Fakela lo msebenzisi kuphela" okanye "Fakela bonke abasebenzisi bale khompyutha"), ucofe u "Kulungile".
Ukufaka iGoogle screensaver esitsha kwiikhompyuter zeMac
Uya kucelwa ukuba ufake ipassword yakho.
Kwiwindow entsha, khetha isikrini esitsha.
Iwindow ephumayo iya kuvela icela imvume yokuhlaziya ngokuzenzekelayo imifanekiso efakwe kwiscreen. Cinezela "Vumela", faka iphasiwedi kwakhona, kwaye i-Google screensaver iya kufakwa kwaye isebenze kwi-Mac yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ukukhutshwa kukaGoogle iiFoto eziKhethiweyo zeScreen zeMac
UManuel Angel Rodriguez Ruiz sitsho
Mva kwemini, ndingumsebenzisi we-MacOs Sierra kwaye emva kokulandela imiyalelo inyathelo ngenyathelo kwaye ndifakwe kwiscreen, ndifumana umyalezo othi ndilinde uhlaziyo olutsha lwenkqubo, kuba ingxelo yangoku ayisebenzi kule Mac, Ngaba uyazi ukuba kutheni oku kunokuba?… Umbuliso.
Phendula uManuel Angel Rodriguez Ruiz
Jonga ukuba wazi kangakanani malunga nebhola ekhatywayo neTrivia League